Weerarkii Ceel-Cadde Imisa qof ayaa u fuliyay Alshabaab kii Janaale & leego.. | Gaaloos.com
Home » News » Weerarkii Ceel-Cadde Imisa qof ayaa u fuliyay Alshabaab kii Janaale & leego..
Weerarkii Ceel-Cadde Imisa qof ayaa u fuliyay Alshabaab kii Janaale & leego..
Warbaahinta Kenya ayaa aad u hadal haya wali Xasuuqii Ciidanka kenya loogu geestay deegaanka Ceel-cadde ee gobalka gedo waxaana markaan ay shaacinayaan tirada Al shabaabkii halkaasi weerarka ku qaaday.
Tirada ciidamada Al-shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka Ceel-cadde ayaa la sheegay iney gaarayeen ku dhawaad 40-80 askari oo si aad u hubeysnaa, waxaana ku wehlinayay weerarka saraakiil ajaaniib ah.
Wargeyska Intellegence Breifs oo soo xiganaya saraakiil Kenyan ayaa dhankiisa sheegay in xubnihii Alshabaab ee weeraray Ceel-cadde ay aad u hubeysnaayeen, waxaana la socday xubno cadaan ah oo aan la shaacin wadamada ay kasoo jeedaan.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Alshabaab ku dhawaad 300 oo dagaalyahano ay ku weerareen saldhigyadii Leego iyo Janaale oo ciidamo Budundi iyo Ugandhees ah lagu dilay.
Sidoo kale, Xogaha sirdoon ee la Helay ayaa sheegaya in Al-shabaab weerarkii Janaale ay qorsheynayeen mudo ku siman hal sano,waxaana sida wararka ay sheegayaan ka gacansiiyay dagaalyahano shisheeye oo ka yimid Syria,kuwaasi oo xiriir la leh Al-Qaa’ida.
Title: Weerarkii Ceel-Cadde Imisa qof ayaa u fuliyay Alshabaab kii Janaale & leego..